नेपाल आइडलबारे किन मुख खोले मनोज गजुरेलले?
नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ १७, २०७४, ११:४९
काठमाडौं- धेरैमा कौतुहल थियो शुक्रबारको 'नेपाल आइडल'बाट कुन प्रतिस्पर्धी बाहिरिएलान्? यो साता उत्कृष्ट चारमा परेका निशान भट्टराई, प्रदाप दास, बुद्ध लामा र सागर आलेमध्ये शुक्रबारकै निर्णयबाट एक जना बाहिरिनुपर्ने थियो। तर यो निर्णय हुन सकेन।
दर्शकको अपेक्षा अनुसार निर्णय आउन नसकेपछि कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा ठूलो हल्लीखल्ली हुन थाल्यो। दर्शकको आआफ्नै अनुमान थियो। तर अब निर्णय कुर्न एक साता पर्खनुपर्ने भएको छ।
प्रतिपर्धीलाई यो साता आएको भोट र अर्को साता प्राप्त हुने भोट जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने घोषणा भएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणीका भइरहेका छन्। कतिले दर्शकलाई धोका भएको बताएका छन् भने कतिपयले आरोप नै लगाए- आयोजकको पैसा कमाउने प्रपञ्च!
यस्तैमा 'स्ट्यान्ड अप' कमेडीमा कहलिएका कलाकार मनोज गजुरेलले भने व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत। उनको व्यंय नेपाल आइडलप्रति भन्दा पनि दर्शकप्रति लक्षित छ।
शुक्रबार कुनै प्रतियोगी नबाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएको टिप्पणीको ओइरोलाई उनले 'मुख खोल्ने' प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै तस्बिरमा आफ्नो मुख बाउँदै गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। आफू पनि मुख खोल्न बाध्य भएको भन्दै उनले नेपाल आइडलमा भइरहेको भोटिङको अर्थ-राजनीतिबारे पनि संकेत गरेका छन्।
गजुरेल यतिबेला कार्यक्रमका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पुगेका छन्।